Ahoana ny fomba fanaovana lasopy | Creatives Online
No lazaiko aminareo nAda nuevo si te digo de ny ankamaroan'ny finday de ny últimos años ya token ny fahafahana mirakitra horonantsary amin'ny efijery feno na amin'ny fomba firaketana mitohy. Si lo haces en ity fomba farany ity, el fitaovana va hakaMandeha aho el Video tsy misy fehar, mijanonaalohan'ny el tiempo de Marinona. Así de, al farany do dIA, tokes un vídeo de unas fanamavoanaas en el de apdiacen nyde los ny Movimhahatsapaos do móratsy.
Toa mora izany, saingy mety ho vokatra matihanina kokoa no tadiavinao. Manaraka Asehonay anao ny fomba fanaovana fe-potoana amin'ny fitaovana samihafa.
1 Inona no atao hoe fe-potoana?
2 Ahoana ny fomba hanoratana fotoana?
3 Fitaovana maimaimpoana
3.1 Fitaovana ara-potoana
¿Qué es un fotoana mamelatsy nanehoan'i?
Un fotoana mamelatsy nanehoan'i (tiempo nampindranao) es una teknika izay ahitana ny firaketana hetsika miaraka amin'ny elanelam-potoana fohy. Esta ACCiON, a su vez, se mpanohanayecta a una velocidad muy nampindranaa nifyro do Video. De esta irayvanim-potoana, se puede Ver un mpanohanaCESo muy ráplasa fro si fuvanim-potoana tenaadamente nampindranao.
Es la opciON tonga lafatraa for hAcer vídeos de sarimiainaales de se muenamana a una velocidad ny zava-drehetraa, fro ny bibikelyos o ny mamíferos pedeños. El vokatraado farany es ampyalohan'ny Sorforndfikambanana ya de una Ny hetsika izay maharitra minitra mazàna dia hita ao anatin'ny segondra vitsy monja.
Ahoana ny fomba hanoratana fotoana?
Raha tsy manana fakan-tsary matihanina ianao, aza manahy, amin'izao fotoana izao, ny ankamaroan'ny telefaona dia mampiditra ny safidy fotoana. Ny zavatra voalohany tokony hataonao dia sokafy ny fakantsarin'ny telefaona ary tadiavo ny safidy lase, rehefa hitanao izany dia tsy maintsy avelanao amin'ny toerana raikitra ny telefaona., tohana tsara amin'ny zavatra na amin'ny tripod. Mifanohitra amin'izany, raha tsy manana an'io safidy io ny findainao dia azonao atao ny misintona ireto fampiharana manaraka ireto:
Atsaharo izany: Amin'ity fampiharana ity dia azonao atao ny manova ny mari-pamantarana. Ohatra, ny elanelan'ny fotoana. Azo alaina ho an'ny Android sy iOS izy io.
Hyperlaps: Miaraka amin'ity fampiharana ity dia tsy maintsy mirakitra horonantsary mahazatra ianao ary manafatra izany ao anatiny. Tsy maintsy amboarinao fotsiny ny hafainganam-pandeha tianao hahatongavana amin'ny fotoana.
Fandehan-damba: Ity fampiharana ity dia manana dikan-teny maimaim-poana sy karama. Miaraka amin'ny voalohany dia azonao atao ny manova ny fotoana lase, manampy famirapiratana, mifanohitra na sivana.
Mba hanala fotoana miaraka amin'ny fakan-tsary dia ny fameram-potoana ihany no ilainao. Ary raha tsy izany, tripod mba hivoaka ny sary ho static araka izay azo atao. Na dia manampy anao aza ny fanohanana azy na aiza na aiza. Hanamboatra ny fakantsary tsara kokoa ny misafidy mode manual M, satria mamela anao hisafidy ny hafainganam-pandehan'ny shutter sy ny aperture ny diaphragm.
Ny soatoavina omenao ny fotoana eo anelanelan'ny sarinao dia hampiova ny fahasamihafan'ny fotoana tsara sy ny mahazatra. Tsy mitovy ny tianao hisambotra ny fihetsehan'ny hazo toy ny an'ny fiara. Miankina amin'ny hoe Canon na Nikon ny fakantsarinao, ao amin'ny Nikon dia tsy mila fameram-potoana ianao, satria amin'ny alàlan'ny fikandrana sakafo dia azonao atao ny manova ny fotoana eo anelanelan'ny sary tsirairay. Amin'ny lafiny iray, ho an'ny Canon, tsy maintsy manitsy ny fotoana sy ny famirapiratana ianao.
Misy safidy hafa koa toy ny ny Gopro izay mampiditra ny safidy amin'ny fampandehanana ny fotoana.
Time-Labscess fitaovana es una fitaovana ahafahanao maka sary misesy ao anatin'ny fotoana iray, y a mitohyfiolahanaON crear un Video de muestra la afehokCIA de la seguhihy de imáGenes, esto for la gfikambanana de tsy misy tMLGa la habillyidad de amin'i Kapitenyurar una seguhihy de fotografías. Azonao atao koa ny misafidy eo amin'ny sivana isan-karazany, manodina ny sarinao, manova ny jiro, ankoatra ny hafa.
Loharano: Avy amin'ny Linux
FFmpeg dia a Fitaovana loharano misokatra hamadika rakitra audio sy video. Ity fitaovana ity dia manana API maimaim-poana, ary misy amin'ny sehatra maro. Azonao atao koa ny mirakitra, mamadika ary mandefa feo sy horonan-tsary.
Azonao atao ihany koa ny mamorona fandaharam-potoana.
ataovyAVI es una etoramhahatsapaa muy auprèsány for la niova foiON de vídeo. Amin'ny alàlan'ny filaharan'ny sary efa voarakitra teo aloha, azonao atao ny mampiditra azy ireo amin'ity fampiharana ity mba hamoronana ny fotoananao manokana.. Azonao atao ny manitsy ny tahan'ny frame araka izay tianao.
Virtual Dub es un fandaharanaa gratFromo y de código abiratsy for la ediciON de señales de vídeo (múltiMba miangavy re endrikaos tafiditrauyendo AVI, MPEG, QuickTime, y WMV) y teny (PCM, MPEG, MP3, AAC, OGG, FLAC, WAV, sns.) en Windows. Lo de lo habidy toy izany espetial es de, mtahaka ny de un Cortniankohoka de hoditraíborikyas, es una etoramhahatsapaa de ediciON de vídeo y teny MPAMPIANATRAes-pirenena, amin'ny una interface tsara de usuMahefa kosa muy intFromIvana.
Tahaka ny MakeAVI, azonao atao ny manova ny tahan'ny frame. Ity fampiharana ity dia manana sivana, ary safidy samihafa toy ny fanovana ny haben'ny horonan-tsaryo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Ahoana ny fomba hanaovana elanelam-potoana
Ahoana ny fanesorana olona ao amin'ny Photoshop